बेप्पू! जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्टमा आनन्द लिनुहोस्! - Best of Japan
बेप्पू शहर रात्रि दृश्य = शटरस्टक
Oita प्रान्त: सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू >
बेप्पू! जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्टमा आनन्द लिनुहोस्!
बेप्पू (別 府), ओइटा प्रान्त, जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। यदि तपाईं पूर्ण रूपमा जापानी हट स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो यात्रामा बेप्पू थप्न चाहानुहुन्छ। बेप्पूमा धेरै ठूलो मात्रामा तातो पानी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू छन्। ठूला सार्वजनिक स्नानहरू बाहेक, त्यहाँ अतिथि कोठाहरूमा निजी स्नानहरू र स्विमशूटको साथ विशाल आउटडोर स्नानहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई विस्तारमा बेप्पूसँग परिचय गराउनेछु।
सिफारिश गरिएको पर्यटन स्थलहरू
कप्पुको पूर्वी भागमा अवस्थित बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। जब तपाईं बप्पू जानुहुन्छ, तपाईं पहिला तातो स्प्रि atहरूमा चकित हुनुहुनेछ जुन यहाँ र त्यहाँ वसन्त हुन्छ। जब तपाईं पहाडबाट बप्पूको शहर दृश्यमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं यस पृष्ठमा देख्न सक्नुहुन्छ, ...
फोटोहरू: बेप्पू (२) चार सिजनहरूको सुन्दर परिवर्तन!
जापानका अन्य पर्यटन स्थलहरू जस्तै बप्पूले पनि वसन्त, गर्मी, शरद र जाडोमा मौसमी परिवर्तनहरूको अनुभव गर्छन्। तातो स्प्रि aroundको वरिपरि दृश्य मौसमको परिवर्तन अनुसार सुन्दर ढंगले परिवर्तन हुन्छ। यस पृष्ठमा, म चार सीजनहरूको थीमको साथ सुन्दर फोटोहरू प्रस्तुत गर्ने छु। सामग्रीको तालिका BeppuMap का फोटोहरू ...
फोटोहरू: बेप्पू ()) विभिन्न हेल्स (जिगोोकु visit) भ्रमण गरौं
बप्पूमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू "हेल्स" (जिगोोकु = 地獄）) हुन्। बप्पूमा पुरातन समयका ठूला प्राकृतिक तातो स्प्रि "लाई "हेल्स" भनिन्छ किनभने तिनीहरूको दृश्य नर्क जस्तो छ। बप्पूमा विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि areहरू छन्। त्यसैले हेल्सको रंगहरू विविध छन्। ती नारकीय फोटोहरूको आनन्द लिनुहोस् ...
फोटोहरू: बेप्पू ()) विभिन्न स्टाइलहरूमा तातो स्प्रि !हरूको आनन्द लिनुहोस्!
जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट बेप्पूसँग विभिन्न प्रकारका स्नानहरू छन्, पारम्परिक सांप्रदायिक स्नानदेखि विलासी विशाल बाहिरी स्नानसम्म। यस पृष्ठमा, विभिन्न नुहाउने दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्! सामग्रीको तालिका बप्पु नक्पका बप्पुका फोटोहरू बप्पू बेप्पूको तातो वसन्त स्नानहरू बप्पू तातो वसन्त स्नान बेप्पू तातो ...
बेप्पूमा जताततै साना आउटडोर नुहाउने ठाउँहरू छन्। यी "अहियु (फुटबाथ)" हुन् जहाँ तपाई सजिलै आफ्नो खुट्टा नुहाउन सक्नुहुन्छ।
बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट क्षेत्र हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको यलोस्टोन पछि बप्पुबाट स्प्रि .्ग पानीको मात्रा विश्वको दोस्रो ठूलो हो। बेप्पूले १२.125.34..1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटे, जुन यलोस्टोनको १ / th० मात्र मात्र हो। जब तपाई बप्पू जानुहुन्छ, तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि कति तातो वसन्त पानी यहाँ पलाएको छ।
बेप्पू लामो समयदेखि जापानको अग्रणी तातो वसन्त रिसोर्टको रूपमा परिचित छ। नुहाउनका लागि विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू प्रयोग गरिएको छ। यसबाहेक, "उमी-जिगोोकु (समुद्री नरक)" र "चिनोइक-जिगोोकु (रगत पोखरी नरक)" जस्ता अचम्मै र colored्गीन स्प्रि .हरूले मानिसहरूलाई स्पटको रूपमा आकर्षित गरेको छ।
आज, बर्ष million० लाख भन्दा बढी पर्यटक बप्पु आउँछन्। बेप्पूमा यी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न त्यहाँ धेरै होटल र र्योकन छन्। बेप्पूलाई नजिकको युफुइनसँग तुलना गरिएको छ। युफुइन एक शान्त तातो वसन्त रिसोर्ट हो। यसको विपरित, बप्पू एक जीवन्त रिसोर्ट शहर हो जहाँ विशाल संख्यामा होटलहरू र मनोरन्जन सुविधाहरू छन्।
भर्खरै, लक्जरी रिसोर्ट होटेल र अन्य सुविधाहरू मध्य बप्पुबाट टाढा पहाडहरूमा खुलेका छन्। यी होटलहरू मध्ये कुनै एकमा आराम गर्न यो एक राम्रो विचार हुन सक्छ।
बेप्पू कहाँ छ?
बेप्पू क्युशुको पूर्वी तटमा अवस्थित छन्। यो ओइटा प्रान्तको प्रिफेक्चुरल राजधानी ओइटा शहरसँग धेरै नजिक छ। यो Oita शहर केन्द्र बाट बेप्पू को लागी कार वा रेल बाट लगभग minutes० मिनेट लाग्छ।
ओइटा एयरपोर्ट → बेप्पू: लिमोसिन बस द्वारा minutes० मिनेट
हनेडा एयरपोर्ट (टोक्यो) → ओइता एयरपोर्ट: १ घण्टा minutes० मिनेट
नरिता एयरपोर्ट (टोकियो) → ओइता एयरपोर्ट: २ घण्टा
इटामी एयरपोर्ट (ओसाका) → ओइता एयरपोर्ट: १ घण्टा
JR टोक्यो स्टेशन - जेआर बेप्पू स्टेशन:6घण्टा
टोक्यो ok कोकुरा: शिन्कानसेन
कोकुरा → बेप्पू: ध्वनि सीमित एक्सप्रेस ट्रेन
बप्पू हट्टो （別 府 八 湯）
बेप्पू शहरमा सयौं तातो स्प्रि .हरू छन्। ती मध्ये, तल सूचीबद्ध आठ ठूला तातो स्प्रिहरूलाई सामूहिक रूपमा "बप्पु हट्टो" (बप्पुमा आठ तातो स्प्रि meaningहरू) भनिन्छ लामो समयको लागि। बप्पू हट्टिको विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू छन्। यसबाहेक, तातो वसन्त क्षेत्रको रूपमा वातावरण पनि फरक छ। जब तपाईं बेप्पूमा आउनुहुन्छ, कृपया विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि enjoyहरूबाट आनन्द लिनुहोस्।
बप्पू ओन्सेन （別 府 温泉
टेकगवारा ओन्सेन बप्पूमा
कुम्हाची अबुरयाको प्रतिमा वा चम्किलो काकाको बप्पु जापान रेलवे स्टेशन स्टेशनको अगाडि अवस्थित छ।
बेप्पू ओन्सेन तातो वसन्त शहर हो जुन जेआर बेप्पू स्टेशनको वरपर स्थित छ र बप्पु हट्टोको सबैभन्दा रमाइलो तत्वहरूको साथ क्षेत्र हो। त्यहाँ १ 1938 XNUMX मा बनेको ऐतिहासिक सार्वजनिक बस पनि छ, जसलाई "टेकगवारा ओन्सेन" भनिन्छ।
मायोबन ओन्सेन （明礬 温泉
"बप्पू ओन्सेन होयोल्यान्ड"। मायोबन ओन्सेन, बप्पु, जापानमा
"बप्पू ओन्सेन होयोल्यान्ड" मायोबन ओन्सेमा। यो बाहिरी नुहाउने एक यूनिसेक्स तातो वसन्त हो
मायोबन ओन्सेन पहाडमा अवस्थित छ, बप्पूको बीचबाट टाढा। "मायोबन" को अर्थ युनोहाना वा फिटकरी हो। यो नामकरण गरिएको थियो किनभने यस जिल्लामा अलम स .्कलन गरिएको थियो।
यस जिल्लामा बेप्पू ओन्सेन होयोल्यान्ड पनि सामेल छ, जुन यसको मिश्रित मड बाथहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ तपाईं दुध सेतो onsen र माटो नुहाउन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। थप बाहिर, तपाईं माथि चित्रहरूमा देखिने बाहिरी मिश्रित माटोको स्नान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो खुला हावा स्नान पारम्परिक मिश्रित लि gender्गको तातो वसन्त हो।
"एएनए इंटरकन्टिनेंटल बप्पू रिसोर्ट र स्पा" एक उच्च श्रेणीको रिसोर्ट होटेल हाल माबोबन ओन्सेनको केन्द्रबाट केही टाढा पहाडमा खोलिएको छ। यस होटलको दृश्य अद्भुत छ।
एएनए इंटरकन्टिनेंटल बेप्पू रिसोर्ट र बप्पुमा स्पा = स्रोत: https://anaicbeppu.com/en/
कन्नावा ओन्सेन （鉄 輪 温泉
कन्नावा ओन्सेनको सुन्दर परिदृश्य
कन्नवा ओन्सेनमा, जताततै भाप उदाइरहेको छ
कन्नवा ओन्सेन, मयोबन ओन्सेनको साथ, एक जिल्ला हो जुन परम्परागत तातो वसन्त शहरको वातावरण कायम गर्दछ। यो बप्पू र मायोबन ओन्सेनको बीचमा अवस्थित छ।
त्यहाँ धेरै जिगोको (नरक = अचम्मका र colored्गको तातो स्प्रि )हरू) छन्, जुन बप्पू पर्यटनको मुख्य विशेषताहरू हुन्। साथै नजिकै युकेमुरी वेधशाला हो, जसले तातो स्प्रि town्ग सहरको मनोरम दृश्य प्रदान गर्दछ। त्यसैले कन्नावा ओन्सेनमा एउटा होटलमा बस्नु राम्रो विचार हुन सक्छ।
जब तपाईं कन्नवा ओन्सेन हुँदै जानुहुन्छ, स्टीम यहाँ र त्यहाँबाट आउँदैछ। यस जिल्लामा पर्यटक सुविधा "जिगोोकु स्टीमि Works वर्कशॉप कन्नवा" पनि छ जहाँ तपाई यस स्टीम प्रयोग गरेर तरकारी र मासु पकाउन सक्नुहुन्छ।
जिगोोकु, युकेमुरी वेधशाला, र जिगोोकु स्टीमि Works कार्यशाला कन्नावाको बारेमा थप जानकारीको लागि यस पृष्ठको दोस्रो भाग हेर्नुहोस्।
कन्काजी ओन्सेन （観 海 寺 温泉）
कंकैजी ओन्सेन, बप्पूमा सुगिनोई होटेल
कन्काइजी ओन्सेनको बेप्पूमा सब भन्दा ठूलो होटेल सुगोनोइ होटेल = स्रोत: https://www.suginoi-hotel.com/
कन्काइजी ओन्सेन मध्य बप्पूबाट सिधा .लोकमा अवस्थित छ। यो जिल्ला पनि पहाडमा भएकोले, दृश्य राम्रो छ।
कन्काइजी ओन्सेनसँग "सुगिनोई होटेल" छ, जुन बप्पुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक विशाल होटल हो। यो होटल ठूलो समूह पाहुनाहरु को लागी संचालित गर्न को लागी प्रयोग गरीन्थ्यो। यद्यपि, भर्खरै नयाँ सुविधाहरू जस्तै अद्भुत दृश्यको साथ विशाल खुला एयर स्नानगृहहरू पुनः सुदृढ गरिएको छ ताकि उच्च-गुणको अनुभव खोज्ने व्यक्तिगत पाहुनाहरू सन्तुष्ट हुन सकून्।
होरिटा ओन्सेन （堀 田 温泉
सार्वजनिक बस "होरिता ओन्सेन" बेप्पू शहरको सबैभन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक बसहरू मध्ये एक हो।
होरिता ओन्सेन एक शान्त हट स्प्रि is हो जुन कन्काईजी ओन्सेनको ढाँचाको छेउमा अवस्थित छ। यो ओन्सेन लामो समयदेखि घाउहरू निको पार्नका लागि तातो स्प्रि asको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यहाँ एक बाधा मुक्त सार्वजनिक बस "होरिता ओन्सेन" छ।
कामगेवा ओन्सेन （亀 川 温泉
बेप्पुकैहिं-सुनायु समुद्री किनारमा कामगेवा ओन्सेनबाट टाढा अवस्थित छ
Kamegawa Onsen समुद्री किनारमा JR Kamegawa स्टेशनको छेउमा अवस्थित छ। पुरानो शैलीको सार्वजनिक बस "हमादा ओन्सेन" र हमादा ओन्सेन संग्रहालय यस जिल्लाको मुख्य विशेषताहरू हुन्।
थप रूपमा, त्यहाँ नगरपालिकाको तातो वसन्त "बेप्पू-कैहिं सुनायु Be 別 府 海 浜 砂 湯 pp बेप्पू बिच बालुवा बाथ）" बप्पू विश्वविद्यालय स्टेशनको नजिक छ। यो शोनिंगहामाको समुद्री किनारमा अवस्थित छ।
तपाईं माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईं "बालुवा स्नान" अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं गेउथर्मल ताप द्वारा तातो बालुवा नुहाउन सक्नुहुन्छ।
शिबासेकी ओन्सेन （柴 石 温泉
शिबासेकी ओन्सेनमा कुनै होटलहरू छैनन्, केवल नगरपालिका सार्वजनिक बस "शिबासेकी ओन्सेन"
शिबासेकी ओन्सेन एउटा सानो तातो स्प्रि from हो जुन कामगेवा ओन्सेनको टेपमा मात्र पर्छ। यहाँ केवल सार्वजनिक बस "शिबासेकी ओन्सेन" छ, त्यहाँ कुनै आवास छैन जस्तो कि होटलहरू छन्।
"शिबासेकी ओन्सेन" स्थानीयहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। यहाँको वातावरण एकदम शान्त छ।
हामावाकी ओन्सेन 浜 浜 脇 温泉
हमावाकी ओन्सेन, बप्पुमा यूटोपिया हामावाकी। यो एक प्रशिक्षण जिमको साथ एक आधुनिक सुविधा हो
हामावाकी ओन्सेन बप्पु ओन्सेनको दक्षिण पूर्वी तटमा अवस्थित तुलनात्मक रूपमा सानो तातो वसन्त क्षेत्र हो। "हामावाकी" भनेको जापानीमा समुद्री किनार हो। यो जेआर बेप्पू स्टेशनबाट १ 15 मिनेटको ड्राइभमा छ।
बेप्पूमा तातो स्प्रि .्ग यस जिल्लाबाट आएको हो भनिन्छ। पुरानो शैलीको र्योकन अझै यो जिल्लामा रहेको छ। तर अब, सार्वजनिक स्नान "हामावाकी ओन्सेन" र तातो वसन्त सुविधा "युटोपिया हामावाकी" प्रशिक्षण जिमले सुसज्जित यस जिल्लाको मुख्य विशेषताहरू हुन्।
बेप्पूसँग धेरै तातो स्प्रि .हरू छन् जुन अद्वितीय रंग र आकारहरूसँग छ। ती मध्ये केही नुहाउनु भन्दा पर्यटक आकर्षणको रूपमा प्रयोग गरीन्छ। तिनीहरू "Jigoku (地獄 = Hell)" भनिन्छ। निम्न जना प्रतिनिधि जिगोोकु हुन्। यी मध्ये पाँच कन्नवा ओन्सेनमा छन् र अन्य दुई शिबासेकी ओन्सेनमा छन्।
कानावा ओन्सेन को पाँच Jigoku वरिपरि हिंड्न सकिन्छ। Shibaseki Onsen का दुई Jigoku पैदल मा सार्न सकिन्छ। तपाईं दुई ओन्सेन बीच बस वा ट्याक्सी लिन सक्नुहुनेछ। जिगोकुको वरपर बस यात्राहरू छन् त्यसैले तपाईं उनीहरूमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं तलका फोटोहरू हेरेर भर्चुअल टुर पनि लिन सक्नुहुन्छ!
Umi Jigoku (海 地獄 = समुद्री नरक)
धेरै पर्यटकहरू नीलो तातो पानीको पानी देख्छन्। Umii jigoku (समुद्री नरक) लाई बोलाउनुहोस् जुन सबै समय धुवाँ रहन्छ। तातो स्प्रि that जुन खनिज कोबाल्ट = शटरस्टक छ
जिल्ला: कन्नावा ओन्सेन
Umi Jigoku (सी नरक) एक उज्ज्वल कोबाल्ट निलो तातो वसन्त हो। तापमान degrees degrees डिग्री सेल्सियस छ र यसको गहिराई २०० मिटरमा पुग्छ। यो जिगोको लगभग १,२०० वर्ष अगाडि जन्मिएको थियो जब माउन्ट। त्सुरमी विस्फोट भयो। यो बप्पुमा जिगोको सबैभन्दा ठूलो हो। यदि तपाई कुनै ठाउँमा जिगोकु हेर्न जान चाहानुहुन्छ भने, Umi Jigoku सिफारिश गरिन्छ।
ठेगाना: 559-1 कन्नावा, बप्पु
पहुँच: २० मिनेट बसबाट बप्पु स्टेशन बाट। "Umi Jigoku" वा "Kannawa" मा जानुहोस्
प्रवेश शुल्क: Y०० येन (वयस्क, व्यक्तिगत)
व्यवसाय घण्टा: :8:०० देखि १:00:०० (सबै बर्ष खुला)
Chinoike Jigoku (Blood の 池 地獄 = रक्त पोखरी नरक)
चिनोइक जिगोोकु वा रक्त पोखरी नरक बेप्पूमा = शटरस्टक
जिल्ला: शिबासेकी ओन्सेन
चीनोइक जिगोोकु (रगत पोखरी नरक) उमी जिगोोकु (समुद्री नरक) को साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो। यो जिगोोकुको रातो र color्ग छ, जस्तै रगत, किनभने तातो रातो माटोले फलामको अक्साइड र म्याग्नीशियम अक्साइड समावेश गर्दछ। उही रंगको आशियु (खुट्टा स्नान) पनि उपलब्ध छ।
ठेगाना: 778 XNUMX नोडा, बप्पू
पहुँच: १R मिनेट JR Kamegawa स्टेशन बाट बस बाट। Chinoike Jigoku मा उतर्नुहोस्। / बिपु स्टेशन बाट by० मिनेट बस बाट। Chinoike Jigoku मा उतर्नुहोस्। ट्याक्सीहरू दुबै स्टेशनहरूमा पनि उपलब्ध छन्।
तात्सुमाकी जिगोोकु (龍 巻 地獄 = तुफान नरक)
बप्पुमा टाटसुमाकी जिगोको
Tatsumaki Jigoku एक गीजर हो कि हरेक 30-40 मिनेट erupts। यो तातो वसन्तमा जमीनबाट m० मिटरको उचाईमा निकाल्न सक्ने शक्ति छ। यद्यपि पर्यटकहरूको जोखिम रोक्न जिगोकुसँग अब ढु stone्गाको छत र चारैतिर पर्खाल रहेको छ, जसरी माथिको फोटोमा देखाइएको छ। Tatsumaki Jigoku gushes जब बल ठूलो छ।
Tatsumaki Jigoku माथिको Chinoike Jigoku पछाडि छ। १० मिनेट पहिले विस्फोट हुनु भन्दा पहिले, रातो बत्ती प्रवेश द्वारमा उज्यालो हुनेछ, त्यसैले यो बत्तीलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो जुन जिगोकोले पहिले देख्ने निर्णय गर्ने क्रममा।
ठेगाना: 782 XNUMX नोडा, बप्पू
शिराइक जिगोोकु (白 池 地獄 = सेतो पोखरी नरक)
बिप्पुमा Shiraike Jigoku
शिराइक जिगोोकु (सेतो पोन्ड नरक) तातो स्प्रि is्ग हो जसमा बोरेट नुन वसन्त हुन्छ। यो पारदर्शी हुन्छ जब यो कुप्रिन्छ, तर यो दुधै हुन्छ जब बाहिरको हावामा पर्दा।
ठेगाना: 278 कन्नावा, बप्पू
पहुँच: २० मिनेट बसबाट बप्पु स्टेशन बाट। "कन्नवा" मा जानुहोस्
ओनिशिबोजु जिगोोकु (鬼 石坊 主 地獄)
बप्पुमा ओनिशिबोजु जिगोोकु
ओनिशिबोजु जिगोोकु उमी जिगोको (समुद्री नरक) को नजिक छ। ओनिशिबोजु जिगोोकुमा, तपाईं अनौंठो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, मानौं ग्रे खरानी उडिरहेको छ। यसलाई सामान्यतया बोजु जिगोको भनिन्छ किनकि यो बोजु (भिक्षुको छाला) जस्तो देखिन्छ। ओनिशिबोजु जिगोोकुको तातो वसन्त सुविधा "ओनिशि-नो-यू" (वयस्कहरूको लागि 620२० येन) छ।
ठेगाना: 559 1 -XNUMX -१ कन्नवा, बेप्पू
पहुँच: २० मिनेट बसबाट बिपु स्टेशन बाट। "Umi Jigoku" वा "Kannawa" मा जानुहोस्
प्रवेश शुल्क: y०० येन (वयस्कहरू, व्यक्तिगत)
व्यापार घण्टा: :8:०० देखि १:00:०० (सबै बर्ष खुला)
कामदो जिगोोकु (か ま ど 地獄)
बेप्पूमा कामदो जिगोको
काम्डो जिगोोकुको अर्थ हुन्छ "कुकिंग पट्ट हेल" जब अ into्ग्रेजीमा अनुवाद हुन्छ। यसलाई एक निश्चित मन्दिरको उत्सवको लागि यस जिगोको स्टीम प्रयोग गरेर चामल पकाएर यसको नामकरण गरिएको थियो। यस नरकमा धेरै तातो स्प्रि .्गहरू छन्। यी तातो स्प्रि ofको र various्ग बिभिन्न छन्, जस्तै माटो, दूध, र निलो।
ठेगाना: 621 कन्नावा, बप्पू
प्रवेश शुल्क:।Y०० येन (वयस्क, व्यक्तिगत)
ओनिमा जिगोोकु (鬼 山 地獄)
बप्पूमा ओनिआमा जिगोोकु
अन्य जिगोको भन्दा फरक, ओनिमा जिगोोकु तातो वसन्तको दृश्यको सट्टा गर्मी वसन्तको तातो प्रयोग गरेर पैदा गरिएको गोहीमा बढी केन्द्रित छ। लगभग cr० गोहीहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्नेछन्।
ठेगाना: 625२XNUMX कन्नवा, बेप्पू
पहुँच: २० मिनेट बसबाट बिपु स्टेशन बाट। "कन्नवा" मा जानुहोस्
जापानको नम्बर १ तातो वसन्त शहर बप्पुको दृश्यमा महिला पर्यटकहरू, सार्वजनिक स्नानगृह र र्योकन ओन्सेन = शटरस्टकबाट भाप भएको शहर
कन्नावा ओन्सेनको पहाडमा, "युकेमुरी वेधशाला" भन्ने नामले एउटा प्राकृतिक दृश्य छ जहाँ तपाईं यो तातो वसन्त शहरलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं यस वेधशालामा जानुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ देखि तातो स्प्रि ste स्टीम माथि र त्यहाँ उठेको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, माथिको चित्रमा देखिएझैं। तपाईले यस पृष्ठमा शीर्ष फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ, स्टीम प्रबुद्ध भएको शानदार रात दृश्य हेर्न लायकको छ।
युकेमुरी वेधशालाको बारेमा जानकारी
कन्नावा पूर्व समूह,, बप्पु
२० मिनेट कन्नवा ओन्सेनको बीचबाट पैदल यात्रा गर्नुहोस्।
२० मिनेट JR बेप्पू स्टेशन बाट कार द्वारा
अप्रिल-अक्टुबर::: ००-२२: ००
नोभेम्बर-मार्च::: ००-२१: ००
जिगोोकु स्टीमि Works कार्यशाला कन्नावा
कन्नवा ओन्सेन, बप्पूमा "जिगोको स्टीमिंग वर्कशॉप कन्नावा" मा स्वादिष्ट "हेल स्टीम व्यंजन" का आनंद लिनुहोस्।
बेप्पूसँग परम्परागत खाना पकाउने विधि छ जुन "हेल स्टीम्ड फूड" हो जुन स्प्रि ste स्टीम प्रयोग गर्दछ। कन्नावा ओन्सेनसँग "जिगोोकु स्टीमि Works वर्कशॉप कन्नवा" भन्ने सुविधा रहेको छ जहाँ पर्यटकहरूले आफैंले यो खाना पकाउने विधि अनुभव गर्न सक्दछन्।
जिगोोकु स्टीमि Works वर्कशप कन्नवाको बारेमा जानकारी
बेप्पूमा नुहाउने पुस्तकहरूको sets सेटहरू (Ideyu ढलानको साथ)
जेआर बेप्पू स्टेशनबाट लगभग २० मिनेट बसमा। "कन्नवा" मा जानुहोस्
:9: ०० देखि २०:०० (नरक स्टीमरका लागि अन्तिम स्वागत १ :00: ००)
* अन्तिम स्वागत समय भीडको आधारमा हुन सक्छ।
* कृपया ध्यान दिनुहोस् कि आरक्षण स्वीकार गरिएको छैन।
मेनू / मूल्य
१) नरक स्टीमर प्रयोगको लागि शुल्क
आधारभूत उपयोग शुल्क (२० मिनेट वा कम)
जिगोोकु स्टीमर (सानो): 340० येन
नरक स्टीम पोट (ठूलो): 550० येन
सामग्री सुविधा मा किन्न सकिन्छ। तल केहि उदाहरणहरू छन्।
समुद्री खाना प्लेट: २,००० येन ~
रेड किंग क्र्याब डिलक्स: 3,900, XNUMX ०० येन
शाबू गोमांस: ,3,000,००० येन
माउन्ट त्सुरमी （鶴 見 岳） & बप्पु रोपवे
माउण्टको शीर्षमा पुग्न करीव १० मिनेट लाग्छ। बेप्पू रोपवे द्वारा ससुरुमी
बेप्पू रोपवे संग, तपाईं यस्तो शानदार परिदृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ
रातको दृश्य पनि अद्भुत छ
बप्पूमा माउन्ट भन्ने पर्वत छ। 1,374.5 मीटर को उचाई संग Tsurumi। बेप्पू रोपवे माउन्टेन टुप्पोमा लाग्छ। यो रोपवे प्रयोग गरेर तपाईं बेप्पू कोजेन स्टेशनबाट शिखरमा पुग्न सक्नुहुनेछ १० मिनेटमा। पहाडको माथिबाट, तपाईं तल एक अद्भुत परिदृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। रातको दृश्य पनि सुन्दर छ।
बेप्पू रोपवे बारे जानकारी
बेप्पू कोजेन स्टेशन （別 府 高原 駅）
१०-10 अजा-कानबारा, ओजा-मिनामी-तातेशी, बप्पु-शहर, ओइटा
जेआर बेप्पू स्टेशन बाट २० मिनेट बसमा
गर्मी मौसम: मार्च १th - नोभेम्बर १th
पहिलो प्रस्थान :9: ००
अन्तिम आरोहण १:17:००
अन्तिम वंश १ 17::30०
जाडो मौसम: नोभेम्बर १th - मार्च १th
अन्तिम आरोहण १:16:००
अन्तिम वंश १ 17::00०
"Oita को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता
फोटोहरू: किनोसाकी ओन्सेन - लोकप्रिय पारंपरिक तातो वसन्त शहर ह्योगो प्रान्तमा